Nhau - Basa revhavha yekutarisa ndeyekuona kuti iyo yepakati iri mupombi inotungamira inoyerera isina kuyerera kumashure
Tarisa vharuvhu, inozivikanwawo sevhavha yekutarisa, imwe yekuyerera vharuvhu, tarisa vharuvhu kana cheki vharuvhu, basa rayo nderekuona kuti iyo yepakati iri mupombi inotungamira kuyerera isina backflow. Kuvhura nekuvhara kwevhavha yekutarisa zvinoenderana nekuyerera kwesimba repakati kuvhura nekuvhara. Tarisa vharuvhu ndeyako otomatiki vharafu zvigadzirwa, cheki vharuvhu inobvumira iyo yepakati kuyerera mune imwe nzira yepombi kuti ishandise, kudzivirira izvo zvinoitika zvepakati backflow. Iyo ine akasiyana siyana ekushandisa, uye inogona kushandiswa mune makuru uye madiki calibers, akasiyana midhiya uye magetsi chiteshi yakakwira voltage system.
Nheyo yevhavha yekutarisa: cheki vharuvhu yakavhurika inoreva kuvimba nepakati kumberi kuyerera kuti uzarure disc, chikonzero chimwe chete iyo yepakati kudzoka kuyerera kusimudzira dhisiki uye yakavharwa, cheki vharuvhu inozivikanwawo sevhavha yekuongorora, imwe-nzira vharuvhu , reverse kuyerera vharuvhu uye kumashure kumanikidza vharafu. Basa hombe revhavha ndeyekudzivirira kudzoka kwekufamba kwepakati, kudzivirira kudzoserwa kwepombi uye mota yekutyaira uye kuburitsa kwepakati pemidziyo. Iyo inoshandiswawo kuchengetedzwa kwekuchengetedzeka mumasisitimu ebetsero uko iko kumanikidza kunogona kukwira pamusoro pechisimba chehurongwa.
Tarisa vharuvhu kupatsanura: cheki vharuvhu inonyanya kushandiswa kudzivirira kushandiswa kwemidhiya kuyerera zvakare mupombi. Iyo yepasi vharafu uye dhadha bhora vharuvhu zvakare ndeya yekutarisa vharuvhu system.
Tarisa vharuvhu inogona kukamurwa kuita yekusimudza mhando, swing mhando, disc mhando matatu:
Rudzi rwekusimudza rwakakamurwa kuita mutete uye yakatwasuka 2 mhando, iyo yekusimudza mamiriro iri kufamba pamwe neiyo axis.
(1) Simudza mhando chinyararire cheki vharuvhu inoshandiswa mukushambadzira kwemvura uye nemadhiraini einjiniya emhando yepamusoro pombi; Panguva imwecheteyo, inogona kuiswa panzvimbo yekubuda kwepombi, uye pombi network ine yakanyanya kumanikidza (PN2.5Mpa) chinhu chakakosha chigadzirwa chemvura isina mvura yekuongorora vharuvhu.
(2) Kusimudza mhando silencer cheki vharafu yakakodzera kune yepamusoro-simuka yekuvaka mvura yekupa uye yekudyira system uye nzira yekubuda kwepombi, haina kukodzera tsvina pombi nguva.
(3) Horizontal cheki vharafu yakakodzera kudhizaivha, abudise, tsvina pombi, kunyanya kune tsvina uye sludge system.
Rudzi rwekutsvedza rwakakamurwa kuita imwechete-vharuvhu mhando, yakapetwa-vharuvhu mhando uye yakawanda-vharuvhu mhando. Iko shanduko yemhando chimiro inosarudzwa zvinoenderana nenzvimbo yegiravhiti kutenderera.
(1) Inosarudza yakavhurika mhando yerabha yekuongorora vharuvhu inoiswa mudhorobha mvura pombi network network, iyo isina kukodzera pombi yetsvina ine sediment yakawanda.
(2) Swing mhando imwe vharuvhu cheki vharuvhu ine yakafararira yekushandisa, inogona kuiswa mumvura nekudonha, peturu, makemikari, simbi, maindasitiri nemamwe mapaipi, inguva dzakakodzera kwazvo dzekurambidzwa kwenzvimbo.
Iyo dhiza dhizaini yakatwasuka-kuburikidza.
(1) Disc kaviri dhisiki cheki vharuvhu inowanzo shandiswa yakakwira-simuka yekuvaka mvura pombi, iine dzinokanganisa midhiya uye tsvina mukushandiswa kwemvura pombi network.
Horizontal cheki vharafu yakakodzera kudhizaivha, abudise, tsvina pombi, kunyanya kune tsvina uye sludge system.